DEGDEG: Is-faham lagu gaaray Shirkii Musharixiinta iyo RW Rooble (Arrimihii la isku afgartay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. DEGDEG: Is-faham lagu gaaray Shirkii Musharixiinta iyo RW Rooble (Arrimihii la isku afgartay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
DEGDEG: Is-faham lagu gaaray Shirkii Musharixiinta iyo RW Rooble (Arrimihii la isku afgartay)
Is-faham iyo heshiis hordhac ah ayaa lagu gaaray shirkii Musharixiinta Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha xilka sii haya uga socday Hotelka Decale ee magaalada Muqdisho.
Shirka oo saacado badan qaatay ayaa lagu gaaray is-afgarad ku saabsan dhacdooyinkii 19-ka Febraayo oo dowladda ay raaligelin ka bixineyso, waxaana dib loo dhigay bannaabixii Berri ay qorsheeyeen Musharixiinta mucaaradka, kaasoo waqti kale (10 maalood gudahood) la qaban doono .
Dhinaca kale waxaa Guddi ka kooban min saddex xubnood loo saaray sii wadista arrimaha harsan ee xal u raadinta khilaafka Doorashada. Guddiga oo min saddex xubnood ka kooban waxaa dhinaca Musharixinta ka mida: C/raxman C/shakur, Dahir Geelle iyo Mustaf Dhuxulow, halka dhinaca xukuumadda ay kala yihiin Xasan Xundubey, Cumar Filish iyo C/raxman Alcadaalla.
waxaana la shaacinayaa goor dhow arrimihii la isku afgartay, iyadoo lagu wado inay shir jaraa’id qabtaan madaxda kala hoggaamineysa labada dhinac.
Previous articleWararkii ugu danbeeyay ee Shirka u socda Musharixiinta iyo RW Rooble (Qodobka ugu adag ee…)
Next articleXasan Kheyre oo ku dhawaaqay in dib loo dhigay Bannaanbixii Berri ka dhici lahaa Muqdisho